Any Questions? ကချင်ပြည်နယ်အစီအစဉ် (တတိယပိုင်း) - DVB
Any Questions? Lead Story ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Any Questions? ကချင်ပြည်နယ်အစီအစဉ် (တတိယပိုင်း)
၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးကြမယ့် First time voters လူငယ်တွေက သူတို့ သိလိုသမျှတွေကို မေးမြန်းပြီး ပါတီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမယ့် Any Question? ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို DVB TV ကနေ့ တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီတစ်ပတ်တော့ ကချင်ပြည်နယ် အစီအစဉ် တတိယပိုင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) တို့ကို Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ဖြေကြားပေးဖို့ ဒီဗွီဘီက ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ပါတီတွေထဲက လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးလီပေါရဲ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ဦးသိန်းထွန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီက လူငယ်ရေးရာ တာဝန်ခံ ဦးနော်ခုန့်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်လတ်က မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးမှာပါ။
တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ပါတီမိတ်ဆက်စကား
ကျနော်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် ၄ ရပ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘာတွေလဲဆိုတော့ နံပါတ်တစ် တစ်ချက်က ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆောင်ရွက်မယ်။ နံပါတ်နှစ်ကတော့ ရှမ်းနီစာ တစ်မျိုးတည်း ပေါ်ပေါက်ရေး ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ နံပါတ်သုံးအချက်က တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမားဘဝ မြှင့်တင်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ နံပါတ်လေးအချက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းစဉ် လေးရပ် ချမှတ်ထားပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ကျနော်တို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ရှမ်းနီလူမျိုး အများစု နေထိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ရှမ်းနီလူမျိုးက စာတွေ အမျိုးမျိုးကွဲနေတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးရရှိမှ၊ နောက် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး တစ်ဦးရှိတဲ့အတွက် အဲဒီနှစ်ဦးစလုံးကို ကျနော်တို့ ပါတီက ရပြီဆိုရင်တော့ ရှမ်းနီစာကို တစ်မျိုးတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိပြုချက်လေးနဲ့ ကျနော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း လူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အဓိက ဦးစားပေးပါတယ်။ လူငယ်တွေကတော့ ပိုပြီးတော့ သိလာပေမယ့် အမျိုးသမီးကတော့ အားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကတည်းက ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ လူငယ်တွေကိုလည်း ကျနော်တို့ သင်တန်းတွေလုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးလုပ်တဲ့၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကျနော်တို့ သင်တန်းပေးခဲ့တာပါ။ အခု ပါဝင်မှုအားနည်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို အဓိကသတင်းစကား ပေးချင်တာကို ကျနော်တို့ စကားပြောမယ်။ ပြောပြီးရင် လူထုဘာလိုအပ်သလဲပေါ့နော်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်လို့ရတာတွေ ရှိမယ်။ အဓိက အရေးအကြီးဆုံးက ၂၀၂၀ အလွန်မှာ ရေးဆွဲလာမယ့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ကျနော်တို့ အရေးတွေ မပါဝင်မှာ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကို ပြည်သူကို ကျနော်တို့ ရှင်းပြပါမယ်။
ကျနော်တို့ ရှမ်းနီလူမျိုးက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့လူမျိုး ပျောက်သွားရတယ်။ ဒီကနေ့ လူမျိုးပြန်ပေါ်ဖို့က လွှတ်တော်ထဲကို ကျနော်တို့ပါတီက များများရောက်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောနော်မိုင် -မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်က NLD ၊ လက်ရှိအာဏာရအစိုးရပေါ့နော်၊ NLD ကို မေးချင်တာပါ။ ပြီးတော့ ကျနော့်နာမည်က နောနော်ပါ။ ကျနော်က ပူတာအိုက ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က အခု ပူတာအိုက လူငယ်ပိုင်းက အများဆုံး ရင်ဆိုင်နေရတာက မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပူတာအိုမှာက မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာက တကယ်တမ်း ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်မယ်။ အဲဒါကို အခုလက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရ NLD အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီပူတာအိုဒေသမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု များနေတာလဲ။ ဘာကြောင့် မထိန်းချုပ်နိုင်တာလဲပေါ့။ ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ဖို့ကော နည်းလမ်းတွေ ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေသလဲပေါ့။ လက်ရှိ ပူတာအိုက မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ဘယ်လိုမျိုး ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာကို ကျနော် နည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
NLD- ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာကတော့ ဒီကချင်ပြည်နယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့အစိုးရအနေနဲ့လည်း အများကြီးလုပ်နေတာပဲဗျ။ အခုနက သူပြောသလိုပေါ့၊ ဂိတ်တွေ ဂိတ်တွေ ဖြတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ ဥပဒေတစ်ခုကတော့ ရှိပြီး အဲဒီဥပဒေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ သူတွေအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာကလည်း အစိုးရတစ်ခုတည်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းနဲ့လည်း လုပ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်၊ ပြည်သူတွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှပဲ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ချမ်းမြေ့လွင်- မေး။ ။ ကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်၊ လက်ရှိ NLD အစိုးရကို မေးချင်တာပါ။ အခု ၂၀၂၀ မှာ ဆက်ပြီးတော့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုတွေ လုပ်သွားဖို့ ရှိပါသလဲရှင့်။ အခုထက်ပိုပြီးတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်သွားပေးနိုင်မလဲရှင့်။
NLD- ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ NLD ကတော့ အမြဲတမ်းပဲ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲ ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ ကျနော် သေသေချာချာတော့ ဒီနေရာမှာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
“ကျနော်မဲထည့်တာ မှားသွားမှာလည်း စိုးတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ အများကြီးရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်နယ် အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ကျနော်တို့ရဲ့ မြို့နယ်အဆင့်ဆင့် ပိုကောင်းတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်။ အများကြီး လုပ်နိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို မျှော်လင့်ထားတယ်။”
“First time voter ဆိုတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမယ်ဆိုတာကို ကျနော်က လေ့လာနေတုန်းပဲ။ ကျနော်အခု သူတို့ ပါတီတွေကိုလည်း လေ့လာနေတယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်ပါတီကိုလည်း လေ့လာနေတယ်၊ ပြည်မပါတီကိုလည်း လေ့လာနေတယ်၊ အခုမှ ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အသစ်တွေပေါ့နော်။ သူတို့ကိုလည်း ကျနော့်အနေနဲ့တော့ လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့ရဲ့ ပါတီမူဝါဒတွေ ဘယ်လောက်ထိ ကောင်းမယ်၊ ဘယ်လောက်ထိ ပေးထားတဲ့ကတိ၊ ပေးထားတဲ့ မူဝါဒတွေအတိုင်း သူတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကို ကျနော်က လေ့လာနေပါတယ်ပေါ့။”
“ကျမတို့ ဒီ ဝိုင်းမော်မှာ နာမည်စာရင်းတွေ မပါတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နာမည်စာရင်းတွေ ပြန်ထည့်ခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ သူတို့ကို ပြန်ပြီးတော့ နှိုးဆော်ပေးချင်ပါတယ်လို့။ နောက်ပြီးရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပထမဆုံးမဲပေးရမယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့မှာ စိတ်အားသန်နေတယ်ပေါ့နော်။ မဲပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ မသိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ပိုပြီးတော့ ရှင်းပြပေးရမယ်လို့။”
“တခြားမြို့ကနေပြီးမှ နယ်ကျွံပြီးရောက်လာတဲ့ မိန်းမလျာက မြို့တိုင်းမှာရှိတယ်။ ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကုန်ရှိတယ်။ ဒီ မြစ်ကြီးနားမှာရောက်လာတဲ့ မိန်းမလျာတွေက သူတို့လည်း လူသားထဲကလူတွေပဲလေ။ သူတို့မှာ အိမ်ထောင်စုမရှိဘူး၊ သန်းခေါင်စာရင်းမရှိဘူး၊ မိဘမရှိဘူး။ ကိုယ့်ဖာသာရုန်းကန်ပြီးတော့ သူတို့က ရောက်လာကြတာ။ အဲဒီအခါကျတော့ ဒီလူတွေက မဲမထည့်ရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုလူတွေအတွက် ဘယ်လိုများ လုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်။ ပြန်ပြီးတော့ အဲဒါလေး သိစေချင်တာပေါ့နော်။”
“ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိမယ့် အမတ်လောင်းတွေပေါ့၊ နောက်ပြီးရင် ကိုယ့်ဒေသအတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက် အားထားရတဲ့ အမတ်လောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပေးပါလို့ …။”
ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင် ပါတီတွေကို မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာ တိုက်ရိုက်မေးကြတဲ့ လူငယ်တွေ ရှိသလို၊ ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် စာတွေနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခု စာတွေနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ်စားမေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပစီခေါန်နူး- မေး။ ။ ကချင်ပြည်နယ်က လူငယ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ပါတီတွေ အများကြီးထဲမှာမှ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီကို မဲပေးမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာမလဲ၊ ပြီးတော့ တခြားပါတီတွေအတွက် တမူထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာ KSPP မှာ ဘာရှိမလဲ။
KSPP-ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ KSPP ကို မဲပေးမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အရမ်းကို မြင့်တက်လာပါမယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ တကယ်ကို အာမခံတဲ့ ကတိတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မြင့်တက်လာတာနဲ့ အမျှ ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ လူငယ်လုပ်သားတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်း စီမံကိန်းနဲ့ ကျနော်တို့ဆီမှာ လုပ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ် KSPP ရဲ့ တမူထူးခြားတာက ဘာလဲဆိုရင် KSPP ဟာ ပြည်သူတွေက ပေါင်းပါ၊ ပါတီတွေ သိပ်များတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ပါတီရဲ့ လူကြီးတွေက မိမိတို့ရဲ့နဂိုပါတီများကို ချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှ ပြည်သူက ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်တဲ့ ဒီ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီဆိုတဲ့ နေရာမှာ အကုန်လုံး ပါဝင်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီဆိုတဲ့ဟာက ကျနော့်ရဲ့ပါတီ၊ ဒီပါတီမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ ပါတီလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီက ဒီလိုမျိုး မူဝါဒကောင်းတွေ၊ ဒီလိုမျိုး ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ လူငယ်များဟာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အားအတောင့်ဆုံး အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင် ပါဝင်ပူးပေါင်းကြတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်လို့၊ ဒါကတော့ KSPP ပါတီရဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝိုင်းမော်က ဘရန်မိုင်- မေး။ ။ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် တိုးတက်အောင် ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဆိုပြီး လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကို မေးထားပါတယ်။
လီဆူပါတီ- ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျေးဇူးပါ။ ကျနော်က လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီကပါ။ ကျနော်တို့ ပါတီရဲ့ ခံယူချက်မှာ လူမျိုးတိုင်းဟာ တန်းတူညီမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမယ်၊ ဒါမှလည်း ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်၊ ဒီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့က ခံယူပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအကုန်၊ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ လူမျိုးအားလုံးကို တန်းတူညီတူတဲ့ အခွင့်အရေးရရှိအောင် ကျနော်တို့ လုပ်မှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလုပ်မှလည်း တိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံသားများဟာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီးမှ တိုးတက်မယ်လို့ ကျနော်တို့က ခံယူပါတယ်။
ဖီမော်ရွာက လူငယ်တဦး- မေး။ ။ ဒေသစုံက လူမျိုးတွေရဲ့ ပညာရေးကို ပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဝေးလံတဲ့ဒေသက လူတွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ဘယ်လို အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို မေးထားပါတယ်။
USDP- ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တို့ ဒီ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စောစောက ကျနော်တို့ရှေ့က ညီအစ်ကိုတွေ ဖြေသွားသလိုပဲ ရေရှည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့် ကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသတွေအတွက်ကတော့ ကျနော်တို့ပါတီသာ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီဒေသတွေအတွက် ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကျနော်တို့ပါတီကလည်း ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိစ္စပေါ့။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိစ္စနဲ့ ကျောင်း၊ အဆောက်အဦကိစ္စပေါ့။ ဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ဒီထက်ဆရာမလိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ကျောင်းဥပဓိရုပ်ကို ကျနော်တို့ပါတီ အနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပဲ ကျနော်ဖြေကြားချင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ကချင်ပြည်နယ်က လူငယ်တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံ
“အသစ်တက်လာမယ့် အစိုးရက တကယ်ကို အလုပ်လုပ်တဲ့အစိုးရ၊ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်လို့။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပေးလိုက်တဲ့မဲကလည်း မရှုံးရအောင် လေ့လာတယ်ပေါ့။ ပါတီအနေနဲ့လည်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို ကျမတို့ လေ့လာပါတယ်။”
“စိတ်လည်း တကယ်လှုပ်ရှားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုဗစ်နိုင်တင်း အကျပ်အတည်းကာလမှာ လက်ရှိအစိုးရကော၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကရော ဘယ်လိုမျိုးကိုင်တွယ်ပြီးမှ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်သွားမလဲဆိုတာတွေကို ကျနော် လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မမြင်ဖူးသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၅ တုန်းက လင်းလင်းရှင်းရှင်းနဲ့ မြင်မြင်သာသာ လုပ်ရတာပေါ့။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ အခုအချိန်က ကိုဗစ်လည်း ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲ၊ ဒါကိုတော့ ကျနော်က စိုးလည်းစိုးရိမ်မိတယ်၊ ပိုပြီးမှ စိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သွားမလဲပေါ့ ဒီအပေါ်မှာ။”
“ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့နော်၊ တကယ်ကိုမှ ကိုယ်မဲပေးတဲ့ပါတီကိုလည်း အနိုင်ရစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ အကယ်၍ ကိုယ်တွေပါတီသာ အနိုင်ရပါတီ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ အများကြီးကို ဖွံ့ဖြိုးစေချင်ပါတယ်ပေါ့။”
“ကချင်ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေက IDP မဖြစ်သင့်ဘူး။ သူတို့က IDP ဖြစ်နေတာအခု။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲ။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒါတွေကို ကျနော်တို့က ဖြေရှင်းစေချင်တယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံး တစ်ခုက ပညာရေး။ ပညာရေးက အလုပ်လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူး။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသလို ဖြစ်နေတယ်၊ အခုအခြေအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ။ ဒီပညာရေးကိုနည်းနည်း လူထုထဲရောက်အောင် လုပ်ရမယ်။”
“ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးတာဆိုတော့ စိတ်လည်းအရမ်းလှုပ်ရှားတယ်၊ ပြီးတော့ မဲပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုလည်း ပျော်ပါတယ်။”
ဂွမ်ဆဲန်အောင်- မေး။ ။ ကျနော့်နာမည်ကတော့ ဂွမ်ဆဲန်အောင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိကတော့ တပ်ကုန်းမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အခုလက်ရှိ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမယ့် First Voter ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပါတီတခုခုနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချင်ပါတယ်။ အဓိက ကျနော်မေးမြန်းချင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို မေးချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ကချင်ဒေသမှာဆိုရင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ အခုထိ ရှိနေတုန်းပေါ့နော်။ သူတို့ နေရပ်ပြန်အစီအစဉ်တွေကအစ သူတို့မှာ အခုအချိန်အထိ မရှိသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ရဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ အရေးတွေကအစ ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သူ့အနေနဲ့ သူအာဏာမရခင်မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့ စကားအတိုင်း ကျနော်တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို သူတကယ် သူ့ရဲ့ ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမမြောက်ဘူးလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ထင်မြင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အဓိကအကြောင်းရင်းက ဘာကြောင့် အဲဒီလိုမျိုးတွေ မလုပ်နိုင်ရတာလဲလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မေးချင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ကျနော့်အနေနဲ့ ပထမဆုံး မဲပေးမယ့်သူဆိုတော့ ကျနော် မဲထည့်မယ့် ပါတီအနေနဲ့ အာဏာရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကျနော်က လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို ကျနော့်အနေနဲ့ လုပ်ပေးစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ ပညာရေးလောကမှာ အကောင်းဆုံး လျှောက်လှမ်းပြီး အောင်မြင်နိုင်မှ နောင်တစ်ချိန်မှာ သူတို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ဖြစ်လာမှာပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က စီးပွားရေးပေါ့နော်၊ ကျနော့်အနေနဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေးကအစ၊ အခွင့်အလမ်းကအစ အများကြီးဖန်တီးပေးစေချင်တယ်။ အဲဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ပေးစေချင်တဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
NLD- ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒီလိုပဲ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ အားလုံးကို စာနာနားလည်းပါတယ်။ အားလုံးကို အဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ NLD အနေနဲ့ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်သလို၊ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ အထူးကြိုးစားနေတာ အားလုံးသိပြီးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကလည်း တစ်ခါတလေကျရင် တစ်ဖက်တည်းက ရချင်ရုံနဲ့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ အားလုံးသော အဖက်ဖက်က ပါဝင်ပတ်သက်သူ အားလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို တကယ်လိုချင်မှသာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့ ကျနော်တို့လည်း တကယ်ရချင်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးလည်း ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။ တတိုင်းပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်။
ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့အစိုးရ တက်လာကတည်းက ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘတ်ဂျက်တွေကို ထူးထူးခြားခြား၊ များများစားစား ချပေးခဲ့တာကိုလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်း ကျောင်းတွေအဆင့်တိုးမြှင့်တာတွေ၊ ကျောင်းအဆောက်အဦ ပြုပြင်တာတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ တိုးချဲ့တာတွေကအစ အများကြီး လုပ်နေခဲ့ပါတယ်လို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂွမ်ထန်အောင်- မေး ။ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျနော့်နာမည်ကတော့ ကို ဂွမ်ထန်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ လူငယ်ကဏ္ဍ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရရင် ကျနော့်အနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။ အခု ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှလည်း မေးချင်တယ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှလည်း မေးချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်ပေးလိုက်တဲ့ ပါတီက အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခက်ခဲနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အမြန်ဆုံးပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
USDP -ဖြေ။ ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်တို့ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၅ ကာလအတွင်းမှာ အစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွင်းမှာလည်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ကျနော်တို့ လမ်းတွေကို ကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖားကန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့ပါတီသာ နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီထက်ကောင်းအောင်ပေါ့။ အခုဆိုရင် ၃ နာရီ သွားလို့ရတဲ့ ခရီးဟာ ၁ နာရီကျော်ကျော်နဲ့သွားလို့ ရနိုင်တဲ့အထိ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ဖြေကြားချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အောင်ဆန်းဝင်း -မေး။ ကျနော်ကတော့ အောင်ဆန်းဝင်းပါ။ ဒီ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မဲပေးရမယ့် ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ပေါ့၊ အကယ်၍ ပါတီတခုခုကိုများ မေးခွန်းမေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုလည်း ခံနေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ကို မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။ ဘာမေးချင်တာလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရရော၊ ပညာရေးအရကော အဖက်ဖက်ကနေ နောက်ကျနေတဲ့ မြို့နယ်လေးတစ်မြို့ပေါ့။ ဒီမြို့နယ်လေးကနေပြီးတော့ သူတို့ကပြောတယ်၊ ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ပါ့မယ်ပေါ့။ ဒီပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီးတော့မှ နိုင်ငံရေးအရကော၊ ပညာရေးအရကော အဖက်ဖက်ကနေ အခွင့်အလမ်းတွေ လုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ စီစဉ်ထားတာတွေရှိလား၊ စီစဉ်ထားတာတွေကို ပြည်သူတွေကို ချပြနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်အသေးစိပ်တွေကော ရှိလားဆိုတာလေး မေးချင်တယ်ပေါ့နော်။
KSPP-ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ မေးခွန်းမေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နိုင်ငံရေးမှာက ခုနကလည်း ကျနော်ပြောထားသလိုပဲ။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့က ပင်လုံကတိကဝတ်ကို အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ကျနော်တို့က တည်ဆောက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုမျိုး နောက်ကျနေတဲ့မြို့တွေ၊ အလှမ်းဝေးတဲ့ မြို့တွေကလည်း ဒီဟာလေးက တည်ငြိမ်သော နိုင်ငံရေးအသီးအပွင့်ကို ခံစားရမှာပါ။
ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ အဓိက ကျနော်တို့တတွေက အဆင့်မြင့်ပညာရေးဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်တန်းတွေကို အများကြီး မွမ်းမံသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ Academic study ပိုင်းမှာ အများကြီး အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်။ ဒီမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ စနစ်တွေကို ကျနော်တို့တတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ ဒါတွေကို အဆင့်မြင့်ပညာရေးမှသည် ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒီလိုနေရာတွေမှာ စာသင်ဖို့အတွက် အဆောက်အဦတွေနဲ့ သင်ကြားပြသမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေ … ဒါတွေကို အများဆုံး မွေးထုတ်ပြီးမှ လုပ်သွားဖို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ တိကျခိုင်မာတဲ့ မူဝါဒတွေ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မောင်မင်းသက်နိုင်- မေး။ ။ ကျနော်က ဒီမြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ အခုဆိုရင် အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီပေါ့။ ဆိုတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးမယ့် First time voter တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ဘယ်ပါတီကို မေးချင်လဲဆိုတော့ NLD ကို မေးချင်ပါတယ်။ ဘာတွေမေးချင်လဲဆိုတော့ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ ဘယ်လိုတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ၊ ကျောင်းသားထုရဲ့ အသံ၊ ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အသံ၊ ပြည်သူတွေရဲ့အသံ။ အမှန်တကယ်ကော ပညာရေးကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်နိုင်မလား။ အခုလည်း လုပ်တော့ လုပ်နေတာတွေ မြင်တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်၊ ဒီထက်ပိုပြီး ကျောင်းသားထုတွေရဲ့ အသံပါအောင်၊ ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အသံပါအောင်၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက ချဉ်းကပ်ထားတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အသံပါအောင် ဒီမိုကရေစီပညာရေး၊ ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဖက်ဒရယ် ပညာရေးတွေကို ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်။
NLD-ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးက အရင်တုန်းကတော့ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် အဆက်အစပ်နည်းနေတယ်ပေါ့။ ဘွဲ့သာရသွားတယ်၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထား မျိုးတွေမှာ ရှိခဲ့တယ်ပေါ့။ အခု ကျနော်တို့ အစိုးရ လက်ထက်မှာတော့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်က ပညာရေး ဘတ်ဂျက်တွေလည်း တိုးမြှင့်တယ်။ ပြီးတော့ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် ဆက်စပ်အောင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တွေ၊ ဥပမာ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ အသက်မွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်တွေဘာတွေ ကောင်းကောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကအစ အထူး ဂရုစိုက်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် ဆက်စပ်မှုရှိအောင် ဒီပညာတစ်ခု တတ်သွားပြီးတာနဲ့ ဒီဘွဲ့တစ်ခု ရသွားပြီးတာနဲ့ သူ့ရဲ့ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေအောင်အထိ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့။ သူ့မေးခွန်းတွေက ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက် အများကြီးလည်း မဖြေကြားနိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကချင်ပြည်နယ် Any Questions? အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ စာနဲ့ ပေးပို့ပြီးတော့၊ ဒါမှမဟုတ် ဗီဒီယိုနဲ့ပေးပို့ပြီးတော့ မေးခွန်းတွေမေးခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေကိုရော၊ လာပြီးတော့ ဖြေပေးကြတဲ့ ပါတီက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Any Questions? အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးကြတဲ့လူ အားလုံးနဲ့အတူ ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ ပရိသတ်တွေ အားလုံးကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲပြီးတော့ သောကြာနဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ ဒီဗွီဘီ တီဗွီကနေ အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: Any Questions?ကချင်ပြည်နယ်တတိယပိုင်း
Previous story အိန္ဒိယတွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ရှိလာ
Next story လူသတ်မှုအပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုများလျော့ချရန် အယ်ဆာဗေဒိုထောင်အခြေအနေကို ပြသ